Ny iray amin'ireo faritra tena ilaina, nefa matetika tsy raharahiahy, amin'ny fampiroboroboana ny fitsaboana ara-pahasalamana eran'izao tontolo izao dia ny fanaovana sterilization. Ny fanamafisana ny zavamaneno sy ny zavatra hafa dia matetika ekena any amin'ny tany an-dàlam-pandrosoana ho fanamby lehibe. Misy fiatraikany mivantana amin'ny fitsaboana ny marary io, noho ny fitomboan'ny risika amin'ny tsimok'aretina vokatr'ireo tsingerin'ny fanamorana.
Ny EcoClave ™ am-perinasa
Ny fampiasana ny zavatra niainantsika dia nahita vahaolana… ny EcoClave ™ izay azo ampiasaina amin'ny faritra tsy misy herinaratra azo itokisana. Mampiasa hazo tena mandaitra ity autoclave ity ary valiny revolisionera ho an'ity olana ity. Ny tsingerin'ny sterilisation feno dia azo antoka amin'ny tontolo izay tsy misy herinaratra na tsy mandeha ny famatsiana azy. Ny endriny tokana dia midika fa mampiasa solika sy hafanana faran'izay mahomby izy, hany ka tonga haingana ny mari-pana mandingana ny autoclave (manodidina ny 20 minitra fihodinana voalohany, 8 minitra, faharoa) ary voatazona mora foana mandritra ny faharetany. Ny fahaizany lehibe dia midika fa azo esorina amin'ny fomba feno ny setroka fandidiana ankapobeny.
Ny pdf "The EcoClave ™" dia mizaha amin'ny antsipiriany bebe kokoa ny sehatry ny fanamasinana amin'ny tontolo iainana ambany ary misy ihany koa data vitsivitsy mahaliana avy amin'ny fanontaniana napetrak'i Tim Beacon rehefa nitantana ny fandaharam-pianarana Care Trauma voalohany any Oganda. Ny fehiny dia saika tsy nisy andrim-panjakana nanatrika nandoto ny fitaovany tamin'ny fenitra mahafa-po sy azo antoka. Misy fiatraikany lehibe izany mikasika ny tahan'ny aretina amin'ny marary. Amin'ny zavatra niainantsika sy tamin'ny fifanakalozan-kevitra tamin'ny hafa dia sary mahazatra eran'izao tontolo izao. Ny EcoClave ™ dia manome vahaolana ary miasa ihany koa ho lakan-drano hanatsarana ny fomba fanao tsara sy azo antoka.
Jereo ny horonantsary
Fantaro bebe kokoa momba ny rafitra EcoClave ™ Wood Fired Autoclave amin'ny alàlan'ny fampidinana ireo antontan-taratasy etsy ambany fotsiny.
Fampisehoana EcoClave ™
Leacolet EcoClave ™
Poster EcoClave ™ GASOC